Brawlhalla dia niditra an-tsehatra tamin'ny ady an-tserasera an-tserasera | Androidsis
Brawlhalla dia tonga amin'ny Android miaraka amin'ny hery lehibe avy amin'ny tanan'ny Ubisoft hametraka anao eo alohan'ny ady an-tserasera marobe amin'ny sehatra multiplayer tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Lalao izay tonga amin'ny endrika tsara miaraka amina vanim-potoana sy ny lalao isan-karazany.
Niandry an'io izahay lalao hitondra rivotra madio amin'ny ady an-tserasera amin'ny lampihazo ary izany dia hohafan'i Ubisoft miaraka amin'ny atiny vaovao ahafahantsika mahazo fanaingoana vaovao, mandalo vanim-potoana vaovao ary ireo toerana izay ahafahantsika "manidina" mitsambikina avy eny amin'ny lampihazo mankany amin'ny lampihazo mandritra ny fotoan-tsika tsara. Ataovy.
1 Mandehana miaraka amin'i Brawhlhalla
2 Endri-tsoratra tsy manam-paharoa 50
3 Lalao crossplatform
Mandehana miaraka amin'i Brawhlhalla
Ubisoft dia misy manolotra ady tena mahaliana ho an'ny lalao izay tsy maintsy hampiasa ny fitsambikinana, ny kapoka manokana nataon'ny mpiadinay sy ireo sehatra hanandrana hamotika ireo mpilalao hafa na ivelan'izy ireo.
Izany hoe, amin'ny alàlan'ny mitsambikina indroa na telo tsy maintsy tazominao amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny lampihazo. Andao lazaina fa karazana "Sumo" izay raha roahina ianao dia very hevitra. Miankina amin'ny fomba filalaonay, ny mpandresy dia ilay nijaly tamin'ny fotoana kely indrindra tokony hiverina amin'ny sehatra ady natolotry ny mpitsara ny lalao.
Brawlhalla afaka mirehareha amin'ny fitondrana anay amin'ny lalao hatramin'ny mpilalao 8 ary izany eo amin'ny sehatra fiampitana misy azy dia mahatratra 40 tapitrisa ny mpilalao eran-tany. Tarehimarika tsy azo iadian-kevitra ary mampiseho amintsika ny haben'ny fahafaham-po atolotry ity lalao ity amin'ny olona an'arivony maro manerana ny planeta.
Endri-tsoratra tsy manam-paharoa 50
Voalohany, tadidio fa manana maody i Brawhlhalla fifaninanana an-tserasera miaraka amin'ny efitrano 1v1 sy 2v2, ary miaraka amin'izay dia fomba iray hafa hahafahanao mankafy lalao tsy andaniam-potoana hampiofanana ny toetranao. Misy mihoatra ny 50 azonao atao ny mamoha, samy manana ny fahaizany sy ny fomba filalaovany ny tsirairay.
Izany no Aterineto mifaninana aiza no misy ny chicha an'i Brawlhalla, satria mamela antsika hiakatra toerana avy any Tin mankany Platinum. Ny rafitry ny lalao dia tompon'andraikitra amin'ny fitadiavana mpilalao mitovy lenta amintsika, koa ny pique sy ny fifaninanana dia azo antoka kokoa hatramin'ny fotoana voalohany nandraisantsika tena tamin'ity lalao multiplayer mahaliana an-tserasera ity.
Etsy ankilany koa isika manana ny efitrano namboarina tamin'ny lalao 4v4, 1v3 ary 2v2 ary misongadina izany amin'ny maha faritra maha-lalaovina azy. Izany hoe, afaka milalao miaraka amin'ny mpiara-miasa aminao ianao amin'ny sehatra hafa izay ao amin'ny PC-nao na console. Mandritra izany fotoana izany, Brawlhalla dia mamela antsika hankafy fomba mahafinaritra hafa tena mahafinaritra toy ny Brawlball, Bombsketball na Capture the Flag.
Mandalo antsika ny vanim-potoana mamela anao hahatratra andiana maherifo vaovao na endri-tsoratra ary koa ampanjifaina azy ireo. Eto isika dia manana ny fihodinan'ny angano misy tarehin-tsoratra 8 isan-kerinandro ary araka ny antoky ny ekipa mpamorona dia ho afaka milalao maimaimpoana hatrany i Brawlhalla ary tsy misy singa karama-handresena. Ny marina dia tamin'ny fotoana nilalaovanay dia nahatonga antsika hahatsapa tena tsara sy maniry bebe kokoa.
Raha ara-teknika dia a Milalao mitandrina be aho raha ny fahitana azy. Ny fahitana ny tontolo iainana, ny famolavolana ireo sahan'ady ireo, ny sarimiaina ary ny famolavolana ny toetra amam-panahy ary koa ny fahaizan'izy ireo dia manana sentra tena tsara. Ny hany zavatra tsy hitantsika tsara dia ny haben'ny soratra, satria indraindray toa tsy maintsy misintona takelaka isika mba hahitantsika azy tsara; ary niresaka momba ny fitsapana azy amin'ny Galaxy Note 10. Izahay, aza adino ny lalao tsara indrindra tamin'ny volana lasa.
Tonga miaraka amin'ny hery lehibe i Brawlhalla ary ho lasa iray amin'ireo mpanafika an-tserasera amin'ny fironana mandritra ny volana vitsivitsy. Manana ny zava-drehetra izy mba ho mpandresy mafy manohitra ny hafa an-tserasera izay mamely mafy tokoa. Anjaranao izao ny manandrana azy ary mankafy ny ady an-tserasera amin'ny sehatra amin'ny fotoana tena izy mba tsy avelanao hifoka segondra ny mpanohitra anao, mitady izany!
Ady an-tserasera marobe mahatalanjona amin'ny sehatra tena izy miaraka amin'ny kalitao ampy ananantsika mandritra ny taona maro.
Ny maso ny tontolo iainany sy ny famolavolana ny endri-tsoratra dia mahafinaritra be
Toa kely ny soratra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Brawlhalla sy ny ady amin'ny sehatra marobe an-tserasera misy ankehitriny amin'ny findainao
Aza miandry bebe kokoa! Azonao atao ny manandrana ny Android 11 amin'ny solosainao